people Nepal » यौन कथाको अधुरो ईच्छा यौन कथाको अधुरो ईच्छा – people Nepal
यौन कथाको अधुरो ईच्छा
Posted on June 1, 2017 June 1, 2017 by Durga Panta
उनले सहजताका साथ झ्याल खोलिन् अनी थोरै सहजताका साथ अगाडी सरिन । मैल पूर्ववत मुद्रामा बसको सिटमा पिठ्यिुँ सोझ्याएँ ।
अगाडीको निद्रा गुमनाम भै सकेको थियो । बस आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेको थियो बस भित्रका मानिसहरु आ–आफ्नै धुनमा मस्त थिए । पधुर लाईट परावर्तित भएर उनको उनको अनुहारमा ठोक्किएर अनौटो विम्ब मेरो मनमा परेको थियो ।
नजिकै बसेकी अपरिचित ती पूर्ण युवतीले मेरो मेरो मनमा अनौठो तरंग उत्पन्न गराएको थियो ।
बोल्नका लागि अतिरिक्त साहस जुटाउनु पर्ने थिएन । अघि नै उनले सुरु गरिसकेकी थिईन् ।
सुन्नुस् न कहाँबाट चढ्नु भएको ।
ए ! ए ! म
थाहा पाउनु भएन की कसो हो ?
हैन गाडीमा चढ्ने वित्तिकै निदाईहाल्छु । होस नै भएन ।
ए ! भन्दै उनी आफ्नो सुरमा लागिन् ।
अनि कहाँ पुग्ने ? तपाई अनि किन रात्री बसमा त ?
मेरो जवाफ भुँईमा झर्न नपाउँदै उनले वुटवल भनिन् ।
काठमाडौँमा काम विशेषले आएको मेरो घर बुटवल हो । माइती, पाल्पा, तानसेन बजार मा नै पर्दछ भन्दै आफ्नो सविस्तार बताईन ।
मैले पनि काम विशेषले कावासोती हिँडेको बताउँदै कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गरेँ ।
बाहिर रात छिप्पिँदै थियो । चुक घोप्ट्याएको निश्पट्ट अध्याँरोले बातावरण पूर्ण निशामा परिणत भएको थियो । बसभित्र बालिएको निलो बत्तिको प्रकासले उनले लगाएको निलो साडीमा परावर्तित भएर म पारदर्शी भएको थिएँ । सलक्क परेको जीउडाल, बसभित्रको उज्यालोसँगै बलेका आँखा अनि चम्किलो अनुहारले म मोहीत भएको थिएँ ।
म अविवाहिता युवक । उनी विवाहिता नारी । एउटा पूर्ण महिला । रातको समय । बस भित्र सवै निदाईसकेका ।
वेतमास गुडेको गाडी । नचाहेर पनि गाडीको तुफानी हावा उनी तिर बग्थ्यो । तातो भएर म तीर ठोक्किन आईपुग्थ्यो । सिल्क्कि परेका केशराषीहरु फरक् कमै तिर फर्कन्थे । मस्त जवानीका साथ मलाई उनमुक्त जिस्क्याउँथे । फेरी अर्को हावाको झोक्कासँगै उनितिरै फर्कन्थे।
उनको र मेरो शारिरिक दुरि केहि ईन्चको फरकमा थियो । कहिले काहिँ गाडिले, उनलाई मुलायम स्पर्ष गर्ने मौका जुराई दिन्थ्यो । संयोग मिल्थ्यो । त्यो बखत म निकैबेर उनिसँगै टासिउँ झैँ हुन्थेँ । उनि कुनै प्रतिकृया जनाउन्नथिन् तर मलाई उनी थोरै पर हटेको अनुभुति हुन्थ्यो ।
हजुरको श्रीमान् के गर्नुहुन्छ नी ?
मैले कुराकानीको सिलसिलालाई जोड्न चाहेँ ।
मलेसिया जानु भएको दुई बर्ष भयो ।
मैले पुनः कुराकानी लाई निरन्तरतरा दिएँ
बिहे गरेको कति बर्ष भयो ?
त्यस्तै दुई बर्ष भयो ।
उनले निराश मुद्रामा बताउँथिन् ।
अनि कतिको सम्पर्क गर्नुहुन्छ ? घर परिवारमा के कस्तो छ ?
म अझ कुराकानलिाई अझ अगाडी बढाउथेँ ।
त्यस्तै त होनी पहिला त नियमित जसो हुन्थ्यो तर अहिले त्यती हुँदैन, उनले आँखिभौँ खुम्च्याउँथिन् र निधारमा आएको कपाल पन्छाउँदै भन्थिन् ।
एनको पुष्ट तथा चौँडा छाति, कसिलो जीउडालले म उनिप्रति लोभिईसकेको थिए मध्यरात तथा उनको स्पर्ष र बोलिको मधुरताले म आकर्षित भैसकेको थिएँ ।
वेलावखत उनले पनि मलाई आखाँ घुमाएर हेर्थिन् । म पनि टाँसिएर पर सथेँ । कुराकानीको सिलसिला जारी नै थियो कुरैकुरामा उनले आफ्नो हात मेरो तिध्रामा राखिन् । त्यही मौका पारेर मैले पनि मेरो हात उनको हातमाथी राखिदिएँ । उनले कुनै प्रतिकृया जनाईनन् ।
म अझ अगाडि बढेर उनको कुमम टाउको अड्याएँझै गरेँ उनले अगाडी सरेर अझैँ सहज बनाईदिईन् । मौन स्विकृती प्रदान गरिन् ।
उनि विहाहिता हुनाले परिपक्व थिईन । छिट्टै म प्रति आकर्षित भएकी उनको अपिल म बुझ्न सक्ने भैसकेको थिएँ । उनी विस्तारै म तर्फ सरिन । म निदाएको बहानामा थिएँ । उनले नजानिँदो पाराले मेरो कपाल मुसार्न थालिन । म श्वास नफेरेको तालमा उनको स्पर्श आश्वादन गरिरहेको थिएँ ।
उनी अझै अगाडी बढिन र जथाभावी जथाभावी स्पर्ष गर्न थालिन् । उनको यसप्रकारको स्पर्षले मैले आफूलाई सम्हाल्ने सक्ने अवस्था रहेन । मैले पनि हात अगाडी बढाएँ । पुष्ट बक्षस्थल माथि कव्जा जमाए । दुवै हात उनको बक्षस्थल वरपर दगुराउन थाले । यसबाट उनि निकै तरंगित भईन् । राफिलो बनीन् । म उनको भर्भराउँदो यौवनको दहमा पौडन थालिसेको थिएँ । उनले पनि मेरो सवै अंग प्रत्यंगमा कव्जा जमाईसकेकी थीईन् ।
केहि वेरको स्पर्ष पछाडी उनी सिथिल भईन् तै पनि उनले मेरो अंग प्रत्यंगमा स्पर्षमा गरिनै रहिन् । मैले पनि उनको लगाएको स्वेटर र साडिभित्र नै हात पसाएर उनको स्त्रित्वको रश भोजन गरिरहेको थिएँ । यसप्रकारको क्रम धेरै बेर रहन पाएन । यो भन्दा अघि बढेर कुनै कृयाकलाप गर्न हामीलाई कठिनाई थियो ।
अचानक बत्ति बल्यो । मुङ्गिलन आईपुगेछ । बस रोकियो । सवै यात्रु खाना खान उत्रिए । मैले हामी पनि उत्रीने कि भनरे सोधेँ । उनले नउत्रने जवाफ दिईन । सवै यात्रु उत्रिएको मोका पारेर उनी भने अझै वेग्लै हाउ÷भाउ देखाउन थालिन् । म पनि तयारै थिएँ । उनले जे गरिन त्यो चुपचाप सहेँ । आग्रह मुताविक नै उनको अंगप्रत्यंगमा खेलेँ । मन्द मन्द गतिमा । उनको श्वासको लयमा । फेरी सबै यात्रु फर्किए । धेरैले हामीलाई नियालेनन् सायद श्रीमान् श्रीमती भन्ठानेर होला । केहि वेर पछि बत्ति निभ्यो । त्यो क्रमको सुरुवात पुनः सुरु भयो ।
बाहिर छिट पुट उज्यालाका धर्षाहरु देखा पर्न थाले खलाँसीले कावासोती बोल्यो । उनको अंगालोबाट फुत्किएर जानु पर्ने भयो । मैले उनको शरिरबाट हात निकालेँ । उनको नम्वर मागेँ । मोबाईलमा नम्वर सेभ गरेँ । काठमाडौँ आए पछि पुन: भेट्ने र अधुरो ईच्छा पुरा गर्ने बाचा गर्दै विदा भएँ । उनी ननिको मान्दै मलाई नियाली रहिन् हुन सक्छ उनको आँखामा आउन्जेल ।
यी ठाउँमा कोरोना खोप दोस्रो मात्रा आजदेखि लगाउन पाइन्छ
७२ हजार किलो सडेको चिनीलाई कसरी खान मिल्ने बनाइयो ?
नेपालमा आत्महत्या गर्नेको तथ्याङ्क डरलाग्दो, मानसिक रोग मुख्य कारण
केयूकेएलले सेयर जारी गर्ने